Tomàs Bigordà | | Tamarta Qoraxda Photovoltaic
Nasiib darrose, maanta tamarta ugu badan ee la isticmaalo ayaa ah Lama cusboonaysiin karoKuwa ka imanaya kheyraadka meeraha ee aakhirka dhammaanaya. Kheyraadka ku jira dhuxusha sida dhuxusha, gaaska dabiiciga ah ama saliida ayaa ah ilaha ugu muhiimsan ee tamarta ay dadku isticmaalaan.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira noocyo kale oo tamar ah sida dabaysha, biomass, biyo-dhuleedka kuwa kale, nasiib wanaag waxay helayaan dhul aad iyo aad u tiro badan. Marka xigta waxaan ka hadli doonnaa waxa ku saabsan Tamarta Qoraxda Photovoltaic: waa maxay, sida loo curiyay iyo barnaamijyada ay hayso.
1 WAA MAXAY Tamarta PHOTOVOLTAIC?
2 SIDEE LOO SAMAYNAYAA Tamarta tamarta leh ee PHOLOLOLTAIC?
3 ISTICMAALKA Tamarta tamarta leh ee SOLAR
WAA MAXAY Tamarta PHOTOVOLTAIC?
La tamarta qoraxda Waa mid ka faa'iideysanaya shucaaca qaybaha qorraxda si ay u soo saaraan tamar. Waa a gabi ahaanba il nadiif ah oo tamar ah, oo aan u baahnayn adeegsiga falgallada kiimikada ama sababa nooc kasta oo qashin ah. Intaa waxaa dheer, waa tamar la cusboonaysiin karo. Tamarta qorraxdu waxay sii joogi doontaa weligeed, ama ugu yaraan, weli balaayiin badan oo sano ah. Marka la soo koobo, waa a nadiif ah, waarta oo tamarta la cusboonaysiin karo. Su’aasha ugu weyni waxay tahay: Maxaa loo beeri waayey? Waxyaabaha aadanaha (Lobbies).
Sida aynu nidhaahno, Tamarta Qoraxda Photovoltaic Waa midka tamarta qorraxda u beddelaya tamarta korantada. Laakiin sidee ayuu isbeddelkani u dhacayaa? Sidee ayaa tamarta qorraxda loo adeegsadaa si dhab ah loo soo saaraa?
SIDEE LOO SAMAYNAYAA Tamarta tamarta leh ee PHOLOLOLTAIC?
La Tamarta Qoraxda Photovoltaic wuxuu ku saleysan yahay mabda'a ah tamarta ku jira qaybaha iftiinka (the sawirro) ayaa loo rogi karaa koronto. Tan waxaa lagu gaaraa waxa loogu yeero habka beddelka sawir-qaadista, oo aan gadaal ka qaban doonno.
Si guud marka loo eego, waxa dhaca ayaa ah, iyada oo la adeegsanayo qalab si gaar ah loogu talagalay ujeedkan, waa la helay koronto mahadsanid saamaynta sawir-koronto iftiinka qoraxda. Guud ahaan aaladahaani waxay ka kooban yihiin biikiko semiconductor ah oo qaata magaca unuga sawirka ama saxanka.
Taas awgeed habka beddelka sawir-qaadista, ayaa la helay tamarta heerkulka hoose (inta udhaxeysa 380 iyo 800 V) iyo midka tooska ah. Ka dib a maalgashi si loogu beddelo talantaalli ah oo hadda socda.
Qalabka ay ku yaalliin unugyadan sawir-qaade ah ayaa loo yaqaan albaabbada qoraxda Iyo, shaqsi ahaan ama adeegsiga qoyska, waxay badanaa leeyihiin qiimo ku dhow 7.000 euro (in kasta oo qiimayaashu hoos u dhaceen oo ay si aad ah hoos ugu dhacayaan). Intaa waxaa sii dheer, qalabkani waxay leeyihiin faa'iido ay ugu baahan yihiin dayactir la'aan. Dabcan, haddii aad rabto inaad sare u qaaddo waxqabadkooda, waa in lagu rakibaa meesha saxda ah (halkaasoo ay saacado badan qorraxdu ka jirto) iyo meelaynta iyo hanuuninta habboon.
Heerka isticmaalka tamarta qoraxda ee loo yaqaan 'photovoltaic tamarta' aad ayuu uga yaryahay ta ay bixiso kheyraadka sida saliida ama gaaska dabiiciga, waana wax badan ama ka yar isla heerka isticmaalka sida tamarta dabaysha (waxay kuxirantahay aagga juquraafi ahaan, dabcan). Si kastaba ha noqotee, isticmaalkeedu wuu sii kordhayaa maantana waxaa horeyba loogu isticmaalay meelo aad u kala duwan, sida aan ku arki karno qaybta xigta.
ISTICMAALKA Tamarta tamarta leh ee SOLAR
Adeegsiga ugu weyn ee tamarta qorraxda ee loo yaqaan 'photovoltaic tamarta qorraxda' waa inay ku xiran tahay awooddeeda ay ugu beddeleyso tamarta qorraxda tamarta korantada Dareenkan, waxaa jira qaabab kala duwan oo loo isticmaalo. Dhinac, waxaa loo isticmaali karaa in lagu abuuro xaddi badan oo tamar ah oo loo iibiyo shirkadaha korontada siiya. Dhinaca kale, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa si shaqsi ah ama qoys ahaan, taas oo ah, in lagu bixiyo tamar guriga. Dad badan ayaa ku dhejiya saqafyada qoraxda dusha sare si ay ugu isticmaalaan tamarta qorraxda tamarte ahaan.
Mid kale oo ka mid ah adeegsiga ugu muhiimsan ee tamarta qorraxda sawir qaade ay yeelan karto ayaa ah inay ku siin karto tamar kuwaas goobaha ay adag tahay in la gaaro ama meelaha ay ku adag tahay inay koronto helaan, taasi waa, meelahaas oo leh heerar horumarineed oo hooseeya halkaas oo aysan marin khadadka korontada.
Sidoo kale, tamarta qorraxda ayaa ah mid ka mid ah hababka ugu waaweyn ee loo bixiyo satalaytyada kuwaa oo ku jira wareegga hawada sare. Xaqiiqdii waxaynu wada aragnay sawir dayax gacmeedyadan, kuwaas oo leh solar ku shaqeeya qaab dhismeedkooda si looga faa'iideysto tamarta ay qorraxdu ku bixiso hawada sare.
Tamarta korantada sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa dhismaha nidaamyada wax soo saarka isku dhafan tamarta, taasi waa, kuwa isku dara tamarta qorraxda iyo dabaysha, ama tamarta qorraxda iyo kheyraadka lafaha.
Ugu dambeyntiina, in kasta oo dad badani aysan aqoon, tamarta qorraxda ee loo yaqaan 'photovoltaic tamarta' ayaa shaqeysa si loo soo saaro tamar loo isticmaalo aagag aad u kala duwan: Telefoonka gacanta. ku celceliyaha raadiyaha iyo telefishanka, wadada SOS ulaha, xakamaynta hago, kontoroolka fog ee shabakadaha waraabka, telemetry, radars, radiotelephony guud ahaan iyo fariimaha la socoshada militariga ama keymaha, telefonka satelite-ka miyiga, taleefoonada, waababka taleefoonka ee loogu talagalay isticmaalka dadweynaha, badalashada, xiriiriyeyaasha raadiyaha
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta Qoraxda Photovoltaic » Waa maxay, sidee loo soo saaraa iyo waxa loo adeegsado tamarta qorraxda ee loo yaqaan 'photovoltaic tamarta' ayaa leh
Barcelona ayaa mamnuuci doonta wareejinta gawaarida ka weyn 20 sano